Kedu ka ndị ahịa email si eji amụma amụma emeziwanye nsonaazụ Ecommerce ha | Martech Zone
Ntoputa nke nchịkọta amụma na email ahịa aghọwo ewu ewu, karịsịa na ecommerce ụlọ ọrụ. Iji teknụzụ na-ebu amụma nwere ike imelite ebumnuche, oge, na mechaa gbanwee azụmaahịa karịa site na email. Nkà na ụzụ a na-arụ ọrụ dị mkpa n'ịchọpụta ngwaahịa ndị ahịa gị nwere ike ịzụta, mgbe ha nwere ike ịzụrụ, yana ọdịnaya ahaziri iche ga-eme ka ọrụ ahụ.
Amụma marketing bụ atụmatụ nke na-eji data omume gara aga iji kọwaa omume n'ọdịnihu. A na-eji data, nyocha, na usoro ịtụ amụma iji chọpụta omume ahịa nwere ike ịtụgharị dabere na profaịlụ na omume ndị ahịa. Data ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime mkpebi ndị mara mma. Mgbe etinyere ya na ahịa email, algọridim nwere ike inyere gị aka ilekwasị anya na ndị na-ege ntị dị mkpa, kwalite ntinye aka, nyekwuo mgbanwe, ma nwetakwuo ego site na mgbasa ozi email.
Kedu ihe nyocha amụma?
Amụma nchịkọta bụ usoro dabere na data nke ndị na-ere ahịa na-eji iji ghọta mmekọrịta ndị ahịa na mgbasa ozi gara aga na ọrụ saịtị nke nwere ike ịkọ omume n'ọdịnihu. Ntụle amụma na-enyere aka n'ịmepụta mgbasa ozi ahịa ahaziri iche yana mkpa. Maka email ahịa ndị ọkachamara, isi data amụma na-enye nghọta na ohere maka omume ndị ahịa dị ka:
Enwere ike ịkagbu ma ọ bụ wepu aha
Enwere ike ịzụta
Oge kacha mma maka ịzụrụ ihe
Ngwaahịa ma ọ bụ ụdị ngwaahịa dị mkpa
Ọnụ ahịa ndụ ndị ahịa n'ozuzu ya (CLV)
Data a nwere ike inyere gị aka ime atụmatụ, nwalee ọnọdụ, ma ọ bụ ọbụna megharịa izipu ozi kwesịrị ekwesị n'oge kacha mma. Nke a bụ amụma ndị nwere ike ịba uru iji kwalite ozi ahụ, wee tụọ arụmọrụ email niile.
Ebumnuche ịzụrụ - Ịghọta ka onye ọbịa nwere ike ịzụta nwere ike inyere gị aka ịga n'ihu ma nyefee ọdịnaya ziri ezi na ozi gị. Ndị ọbịa nwere mmasị dị elu nwere ike ịtụgharị, na ichekwa ego gị maka kọntaktị dị otú ahụ ga-ebuli LTV elu.
Ụbọchị amụma maka ịzụrụ na-abịa - Ndị ESP dị n'etiti na ọkaibe nwere ike ịchịkọta omume ịzụrụ kọntaktị na ịtụ anya mgbe ha nwere ike itinye usoro ha na-abịa, na-enye gị ohere ịnye email ozugbo yana ngwaahịa akwadoro n'oge kwesịrị ekwesị.
Otu ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa ọkacha mmasị - Ịmata ụdị ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa nke onye ọrụ ọ bụla na-ahọrọ na-enye gị ohere ịmepụta ozi-e gị nke ọma na ngwaahịa nke ha họọrọ.
Ọnụ ahịa ndụ ndị ahịa tụrụ anya ya (CLemV) - Site n'ịlele uru akụkọ ihe mere eme nke onye ahịa, ugboro ole ịzụrụ ya, na ụbọchị a na-atụ anya ya, enwere ike ịmepụta uru ogologo ndụ nke amụma. Nyocha a na-enyere gị aka ịghọta onye n'ime ndị ahịa gị kacha eguzosi ike n'ihe ma ọ bụ eleghị anya ịtụgharị na ọnụ ahịa ọnụahịa dị elu dị elu (AOV).
Ịmepụta nyocha amụma na mgbasa ozi ahịa email gị ga-eme ka mkpọsa gị yie nkeonwe, dabara adaba na oge - meziwanye ego gị.
Kedu ka nyocha amụma si enweta oge?
Ma ahịa amụma amụma na amụma amụma guzoro na $ 10.01 nde na 2020 ma buru amụma na ọ ga-emetụ $ 35.45 ijeri site na 2027, wee too na ọnụego uto kwa afọ (CAGR) nke 21.9% n'etiti 2020 ruo 2027.
Ọnụ ọgụgụ ahịa amụma amụma: 2027
Enwere ọtụtụ ihe na-akpalite ama ama nke nyocha amụma.
Teknụzụ nchekwa nchekwa adịghị ọnụ ma nwee ike ịgbatị, na-enye ike ijide na nyochaa terabytes nke data ngwa ngwa.
Ịhazi ọsọ na ebe nchekwa oke na sava na mebere sava (n'ofe sava) na-enye ohere iji jikwaa ngwaike iji mee ihe ngosi na-enweghị njedebe iji buo data.
Platforms na-ejikọta ngwá ọrụ ndị a ọnụ ọgụgụ dị ukwuu ma na-eme ka nkà na ụzụ dị mfe ma dị ọnụ ala maka azụmahịa ọ bụla.
Ihe niile dị n'elu na-enye nkwalite dị ịrịba ama na nsonaazụ mgbasa ozi ahịa, na-ebute nlọghachi ngwa ngwa na ntinye ego nke nkà na ụzụ (ROTI).
Iji nyocha amụma amụma na ahịa email
A bịa n'ịre ahịa email, nyocha amụma na-akwado onye na-eweta ọrụ email nke otu ụlọ ọrụ wee jikọta njirimara omume ozugbo yana data ndị ahịa gara aga iji mepụta ma mkpọsa ozi email nke akpaghị aka yana ahaziri onwe ya. Uru ya agbakwunyere bụ na ọ na-enye aka site na nnweta na mmekọrịta-ewu na njigide ndị ahịa na mkpọsa email na-emeri.
Nke a bụ ụzọ anọ amụma amụma si eme atụmatụ mkpọsa email gị:
Inweta ndị ahịa ọhụrụ - N'ofe usoro mgbasa ozi ndị ọzọ, ohere profaịlụ na ịmata ndị na-ege ntị na-ele anya bụ ụzọ dị mma nke ịzụ ahịa maka ndị ahịa. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke igwe mgbasa ozi nwere ikike ibubata adreesị ozi-e iji kọwaa ndị ọrụ gị n'ụzọ igwe mmadụ, na mpaghara, na ọbụna dabere na mmasị ha. Mgbe ahụ, enwere ike iji profaịlụ (ma ọ bụ profaịlụ) ahụ ịkpọsa ndị ahịa na-atụ anya ya na ntinye aha maka ịre ahịa email gị.
Ntughari na-abawanye - Mgbe ndị ahịa nwere ike bụrụ ndị mbụ debanyere aha na-enweta email nkwado site na ụlọ ọrụ, ha na-enwetakarị usoro email nnabata na igbe mbata ha. Ebumnobi ya bụ ịkpali ha ịzụrụ ngwaahịa. N'otu aka ahụ, atụmanya ọhụrụ na-enweta ozi-e ndị dị otú ahụ, na mgbe ụfọdụ onyinye nkwado dị mma. Site na itinye amụma amụma na data igwe mmadụ, yana data omume, ị nwere ike kewaa ndị ahịa nwere ike - ịnwale ọtụtụ ozi, na onyinye - iji mepụta ozi ịntanetị na-enye nkọwa, dị mkpa na nke ahaziri ahazi na-emezi mgbanwe, wee nweta ego ha nwetara.
Iwulite mmekọrịta maka njide ndị ahịa - Ntụle amụma nwere ike iji nhọrọ ndụmọdụ ngwaahịa maka ntinye aka ndị ahịa, na njigide. Data a nwere ike inyere gị aka ịche ndị ahịa kwesịrị ekwesị zụrụ ngwaahịa gị na mbụ ma ọ bụ chọgharịa na weebụsaịtị gị. Na-agbakwụnye nkọwa dị iche iche dị ka afọ, okike, ego ole, ebe, wdg. Ọ ga-ekwe omume ịmata ụdị ngwaahịa ha ga-achọ ịzụta n'ọdịnihu. Site na data a, ị na-eziga ọdịnaya email na onyinye nye ndị atụmanya n'otu n'otu. Ntụle amụma bara uru n'ịchọpụta ugboro ole ndị ahịa na-azụrụ ihe, ị nwere ike ịghọta oge kacha mma iziga ha ozi-e metụtara ngwaahịa gị.
Atụmatụ mmeri ndị ahịa – Na-eziga a anyị na-atụ uche gị ozi na ozi-e nye ndị ahịa niile ka oge ụfọdụ gachara kemgbe ha zụrụ ngwaahịa. Site n'enyemaka nke nyocha amụma, ị nwere ike ịmepụta ozi-e nweghachi azụ nke ahaziri iche, wee chọpụta oge kacha mma iji ziga ha ozi-e, ma nye ụfọdụ mbelata ma ọ bụ ihe mkpali iji nwetaghachi ha.
Ịre ahịa amụma bụ ngwá agha siri ike maka ndị na-ere ahịa ịghọta ndị na-ege ha ntị ma nyere ha aka itinye usoro dị ike na mgbasa ozi email ha. Na nke a, ị nwere ike ịmasị ndị debanyere aha gị, ma gbanwee ha ka ha bụrụ ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe, nke na-eduga n'ịbawanye ahịa.
Tags: ebumnuche ịzụrụchurnntụgharị ntụgharịahịa ndụ urundị ahịa mmeriecommerceemailemail Marketingndị na-ege ntị yiriọdịnaya ọdịnayanchịkọta amụmaamụma email ahịaamụma ịre ahịaNkwado ngwaahịaụbọchị ịzụtannweta nnwetannweta nke ndị debanyere ahandebanye aha churn